Sayensị na nkà na ụzụ + akwa ejiji, maka Shenzhou 12 astronauts inye nchekwa na ndụ ndụ - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd.
Dọrọ yarn ederede
Rubber kpuchie yarn
Yarn Elastic Earn
Detuo naịlọn Yarn
Yarn / FDY zuru ezu dọrọ
Yarn N'ihi na Leggings
Yarn N'ihi uwe ime
Yarn Maka akwa
Yarn Maka Towel
Yarn Maka akpụkpọ ụkwụ
Yarn N'ihi embroidery
Yarn Maka wingkwa Akwa Jikọọ
Yarn Maka sọks
Sock akpa igwe
Uwe mkpuchi igwe
Sayensị na nkà na ụzụ + akwa ejiji, maka Shenzhou 12 astronauts inye nchekwa na ndụ ndụ
Na June 17, ndị Shenzhou 12 ugbo elu ndi mmadu gbawara ndi nlere njem ato -- Nie Haisheng, Liu Boming na Tang Hongbo -- n'ime oghere, na-amalite ndụ ha dị ka ndị ọrụ mbụ nke oghere oghere na isi modul. Usoro uwe pụrụ iche maka ndị astronauts na usoro dum nke ịrụ ọrụ na ibi na mbara igwe na ala, yana akpụkpọ ụkwụ maka ndị na-agụ kpakpando na ozi ọdụ ụgbọelu, ha niile sitere na nsonaazụ nyocha nke Mahadum Donghua.
Atọ "nwoke mara mma" na "ekike oghere"
Mepụta kpakpando nke kpakpando
Shenzhou 12 astronauts na nzukọ nke 16 na ndị nta akụkọ, mmadụ atọ na-agụ kpakpando yi uwe na Donghua University astronauts uwe nyocha na mmepe otu mepụtara mara mma na Jiuquan Satellite Launch Center Tiange. Donghua mahadum nnyocha na mmepe imewe otu iji hụ na astronauts astronauts na ohere na ala na-arụ ọrụ dum usoro nke na-emebe a usoro nke pụrụ iche uwe, gụnyere ndị astronauts na oghere ọrụ ndụ na-egosipụta uwe ọrụ, suut, Uwe ejiji, enweghị nchedo uwe, na-ehi ụra, wdg, na ihe nzuzo, ọrụ, ọzụzụ, Uwe ejiji puru iche nwere otutu udiri, dị ka ịrụ ọrụ na ala Uwe ndị a pụrụ iche abụghị naanị hụ na mmejuputa ọtụtụ ọrụ pụrụ iche, kamakwa n'ime njirimara ndị China nke ihe eji emepụta, bụrụ ndị astronauts ịpụta na ụwa "uwe oghere".
Ihe a haziri, agba, ụkpụrụ na udidi nke usoro niile nke oghere na ngwa kwekọrọ na ibe ha ma jikọta gburugburu ebe obibi, na-egosipụta omenaala ndị nwere agwa ndị China na njirimara nke Times, yana njirimara ndị ọkachamara na echiche mmụọ nke obodo astronaut ahụ. Usoro oghere nile nwere ọrụ dị iche iche, ma ọ bụ nwere ike inyere ndị na-agụ kpakpando ogologo oge ohere iji ụgbọ elu mee ihe megide mmetụta ọjọọ nke enweghị ịdị arọ na akwara mmadụ, ma ọ bụ chebe ndị na-agụ kpakpando iji dozie ọnọdụ na ọnọdụ ha, kamakwa tụlee ebe obibi ọkụ maka foto, nnyefe vidiyo na onyonyo mgbe ngosipụta ngosi.
Ọmụmaatụ, ke imewe nke astronauts \_ 'uwe mgbe niile, agba nke elu-igwe na-acha anụnụ anụnụ nke ọdọ na-agbakwunye iji gosipụta mbara igwe na ihe ndị hue nke oghere. Mgbanwe dị na ndo na ndo na-eme ka uwe ahụ dịkwuo atọ ma juputa, ma nwee uche nke ndị isi. Na usoro, a na-ejikarị akụkụ atọ dị iche iche eme ihe. Ardị S nke yiri ubu ihu, nke bụ ihe atụ maka ebe efe ụgbọ elu, na-ekwughachi eriri ogologo ihu V nke igbe ihu, nke bu akara mmeri, na-eweta nkwekọ kwekọrọ na nke akụkụ na akụkụ.
Na mgbakwunye na uwe n'onwe ya, nhazi nke ụfọdụ uwe ihe ndị astronauts na-eyi kwesịrị ịdabere na agba na ihe nlele nke usoro ejiji uwe. N'etiti ha, isi akara nke astronaut nsọpụrụ logo dị ka trajectory nke ugboelu ụgbọelu na-acha anụnụ anụnụ, na-eme ka ndi mmadu nwee echiche nke elu elu, ọnụ ọgụgụ kpakpando nwere mkpịsị aka aka ise egosi ọnụ ọgụgụ nke onye nwe ha iji rụọ ọrụ ụgbọ elu ndị mmadụ. Ndị otu ahụ gosipụtara echiche na ịdị mma mara mma "Na-efe efe Apsaras" ya na nka di iche iche site na ndi agha dika uwe ndi astronauts.
Ụkwụ "n'ígwé ojii" agagharị na ụbọchị itoolu
"Njem nke otu puku kilomita ga-amalite site na otu nzọụkwụ." Akpụkpọ ụkwụ eji na mbara igwe na mbara igwe kwesịrị ịbụ "mgbanwe" iji kpuchido nchekwa na nkasi obi nke ụkwụ, mgbe ewere n'ime akaụntụ fashionable imewe na oké omenala. Aghọtara na imepụta na mmepe nke akpụkpọ ụkwụ ime ụlọ na-ejikọ uru ịdọ aka na ntị nke Mahadum Donghua n'ọhịa nke anthropometry, ergonomics, ihe omumu, atọ ịme ngosi uwe, ngwangwa prototyping, imepụta ngwaahịa na mpaghara ndị ọzọ, ma nweta nkwado nke ụlọ ọrụ ego na yiri ekwenye ụlọ ọrụ na nkeji. Ọ na-emetụta teknụzụ dị elu na mmeta dabere na injinia mmadụ (ergonomics) ruoergonomicsachasị, jikọtara ya na teknụzụ 3D nyocha, nyocha nrụgide ụkwụ, ike ịkpa ákwà na teknụzụ ndị ọzọ, ma jiri nlezianya na oke oke tụlee ihe ndị ekike, tinyere gburugburu ebe obibi pụrụ iche nke oghere oghere, njirimara mmadu, ochicho nke mmeghari na ndi ozo.
Ihe eji akpụ akpụ akpụkpọ ụkwụ dị n'ime ya bụ isi ihe dị iche iche na ihe ndị nwere ike ịkpụkọ, nke dị nro, ìhè, gburugburu ebe obibi, antistatic, na-eku ume ma na-agbanwe, ijide n'aka na nkasi obi na nchekwa nke ụkwụ nke ndị na-agụ kpakpando na mbara igwe na mbara igwe na-enweghị atụ. N'otu oge ahụ, A na-eji akpụkpọ ụkwụ mee ụlọ akpụkpọ ụkwụ, a haziri usoro nha iji kpuchie ọtụtụ nwoke na nwanyị astronauts n'otu n'otu, na-eburu n'uche mgbanwe dị n'ọdịdị nke obo ụkwụ ụkwụ n'ọtụtụ ebe ọrụ iji kwekọọ na mmegharị mmegharị nke ụkwụ ndị astronauts '. N'ihi microgravity nke ụlọ ahụ na ịdị arọ dị mkpa nke mbara igwe, akpụkpọ ụkwụ ụlọ ahụ dị ọkụ karịa akpụkpọ ụkwụ nkịtị ndị mmadụ na-eyi.
Attemptgbalị ịme ngosi ụkwụ ụkwụ "ọgịrịga azụ" pịnye wavy Ọdịdị, iji hụ na ịdị n'otu nke mgbanwe na nchedo, iji chebe nkukota nke ndị na-agụ kpakpando, ụkwụ n'ihu na azụ imewe zuru ezu, ọ bụghị naanị ime ka iyi dịkwuo mma, kamakwa ihe nlere uzo ato. Agba agba ikpeazụ bụ ngwakọta nke "oghere miri emi na-acha anụnụ anụnụ" na agba ojii. Black gosipụtara ihe ejiji na teknụzụ, na-acha anụnụ anụnụ nke ụlọ uwe elu iji nweta a uche nke kwekọrọ na visual collocation.
Inlọ bụ nods eyeball pen nke akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ, na ndabere nke nkwa ọrụ, dum naanị nke oghere si imewe bụ n'ihi nke "ụbọchị itoolu ka" gbanwee agwa akara nke njirimara agwa mara mma nke China, mpụga mgbanaka gburugburu Sunday "kpakpando", okirikiri, ọ bụghị naanị pụta ìhè na "ụbọchị itoolu iji maaja, amaja na penta-oké osimiri jidere mbe" ochicho ndu nke ike di uku, mmetụta ịhụnanya ndị China na site na ibe.
(Isi mmalite: Textile News ukara micro blog)
Enwere ike iji eriri PA66 a gbanwere Graphene rụọ ọrụ maka nlekọta ụkwara ume ọkụ na sistemụ ịdọ aka na ntị dịpụrụ adịpụ
Kpọọ Anyị Free+8613655857951
Nwepu © 2019 Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ikikere ikike.